Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirarka » Safka Muhiimka Ah Ayaa Jakarta Ka Furay Madasha Dalxiiska Caalamka
Guddiga Dalxiiska Afrika • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Indho Indho Indoneesiya • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dadka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska
Shirka Hoggaamiyeyaasha Madasha Dalxiiska Adduunka
Golaha Dalxiiska Caalamiga ah (GTF) ayaa saaka ka furay Jakarta Shirka Hoggaamiyeyaasha Aasiya waxaana uu marti gelinayaa saf muhiim u ah hoggaamiyeyaasha dalxiiska.
Hoggaamiyayaasha Hoggaamiyayaasha Asia waa dhacdo caalami ah oo ku saabsan dhinaca dalxiiska iyo martigalinta.
Shir -madaxeedka ayaa looga golleeyahay in lagu fududeeyo cilmi -baaris dalxiis oo tayo leh si loo wadaago guulaha iyo is -weydaarsiga fikradaha u dhexeeya dowladaha iyo dunida ganacsiga.
Madasha Dalxiiska Caalamiga ah waa hindise Machadka Madasha Dalxiiska Adduunka ee fadhigiisu yahay London.
Shir Madaxeedka Aasiya wuxuu socon doonaa maanta iyo berri, Sebtember 15-16, 2021. Waa madal iskaashi caalami ah oo diiradda lagu saarayo wax ka qabashada caqabadaha ku wajahan warshadaha socdaalka. Iskudarka dadaallada wadajirka ah ee hay'adaha dawladda, daneeyayaasha warshadaha iyo tacliinta, GTF waxay ku dadaaleysaa sidii loo gaari lahaa moodallo horumarineed oo waara oo loogu talagalay suuqyada socdaalka ee soo baxaya, iyo sidoo kale sameynta xeelado lagu hubinayo kobaca dalxiiska.
Waxay ahayd Madaxweyne ku -xigeenka Indonesia, Mudane Prof. Macruuf Amiin, oo shaqsi ahaan u furay Shir -madaxeedka Hoteelka Raffles ee Jakarta ka dib markii uu soo dhoweeyey khudbadihii Dr. Sapta Nirwandar, Guddoomiyaha Dalxiiska Indonesia; Mr. Balut Bagci, Guddoomiyaha Machadka Madasha Dalxiiska Adduunka; iyo Dr. Sandiaga Salaaxudiin Uno, Wasiirka Dalxiiska iyo Dhaqaalaha Hal -abuurka ee Jamhuuriyadda Indonesia.
Dr. Taleb Rifai oo ahaa Xoghayihii hore ee UNWTO haddana ah Xoghayaha Guud ee Machadka Madasha Dalxiiska Adduunka & Kaaliyaha Guddiga Dalxiiska Afrika, ayaa isaguna xafladda furitaanka ka hadlay.
Safka cajiibka ah ee dadka hadlaya waxaa ka mid ah Madaxweyne ku -xigeenka Turkiga, Mudane Fuat Oktay; HE Dato Dato Lim Jock Hoi, Xoghayaha Guud ee ASEAN; Mudane Mr. Tony Blair, RW hore ee UK; Alain St.Ange, Wasiirkii hore ee Dalxiiska, Duulista Hawada, Dekedaha & Badda Seychelles haddana ah Madaxweynaha Guddiga Dalxiiska Afrika & Xog-hayaha Guud ee FORSEAA, oo ay ka mid yihiin dad badan oo kale oo caan ah. Safka Wasiirrada Dalxiiska ee ASEAN ayaa sidoo kale yeelan doona kulan dood gaar ah.
Shakhsiyadda Dalxiiska ee 2021 oo loogu magac daray Madasha Dalxiiska Caalamiga ah wuxuu ahaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Indonesia.
Madasha Dalxiiska Caalamka sidoo kale wuxuu kaalin hoggaamineed ka qaataa soo jiidashada maalgashiga tooska ah ee shisheeye ee dalka la beegsanayo, isagoo ka shaqeynaya sidii loo ogaan lahaa fursadaha ganacsi, kor u qaadida dhacdooyinka istiraatiijiga ah iyo kaalmaynta amaahda maal -gashadayaasha shisheeye ee doonaya inay u qoondeeyaan kheyraadka dalka la beegsanayo.
Waa maxay sababta Indonesia?
Dalxiiska Indonesia waa tusaalaha ugu wanaagsan ee sida saxda ah wax loo sameeyo. Waaxda dalxiiska ayaa ah isha lagama maarmaanka u ah lacagta qalaad ee dalka waana qayb lagama maarmaan u ah dhaqaalaha.
Indooniisiya waxaa lagu qoray 20-ka dal ee ugu soo jiidashada badan dalxiiska adduunka iyo 9-aad ee ugu ballaarinta badan adduunka 2017. Qaar badan oo ka mid ah meelaha ugu caansan dunida ayaa si weyn u kordhay sanadka 2018, iyadoo Denpasar, Jakarta, iyo Batam ay ka mid yihiin tobanka dal ee sida ugu dhaqsaha badan u koraya, oo leh 32.7, 29.2, iyo 23.3 boqolkiiba korodhka sannadka oo dhan u dhigma. Warshadaha dalxiiska ayaa ahaa kii afaraad ee ugu weynaa marka la eego mugga badeecadaha iyo adeegyada la dhoofiyo.
Booqashooyinka booqdaha shisheeyaha ee Indonesia ayaa kordhay 1.9% sannadka 2019, halka ay ka ahayd 16.1 milyan sannadka 2018. Qiyaastii 9.73 milyan oo dalxiisayaal ajnabi ah ayaa yimid Indonesia sannadkii 2015kii, iyagoo celcelis ahaan ku qaatay 7.5 habeen hoteellada iyo joogitaanka celcelis ahaan 7.5 maalmood, wadar ahaan oo ku saabsan $ 1,142. Isla sannadkaas, booqdayaasha dibedda ee Indonesia waxay kharash gareeyeen qiyaastii $ 152 maalintii ama $ 152.22 maalintii celcelis ahaan. Mid ka mid ah shanta ilaha dalxiiska ee ugu muhiimsan Indonesia waa Singapore, Malaysia, China, Australia, iyo Japan.
Indonesia ayaa gashay kaalinta 40aad guud ahaan Warbixinta Tartanka Dalxiiska iyo Dalxiiska 2019 oo leh dhibcaha Tusaha Tartanka Dalxiiska iyo Dalxiiska ee 4.3. Indooniisiya ayaa kaalinta 42aad ka gashay 136 waddan oo ku jira daraasadda 2017 dhibcaha 4.2. Sida laga soo xigtay daraasadda, warshadaha dalxiiska ee Indonesia ayaa leh qiimeynta tartamada qiimaha ee saddexaad ee 141 waddan.